ओलीका विश्वासपात्र यी नेताको अर्वौ सम्पतिको खुलासा , : काठमाडौँ मै २३ आना जग्गामा महल - Prateek Nepal
काठमाडौँ / हाल उपप्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल तत्कालीन नेकपा मालेमा रहँदा ०४४ सालताका भूमिगत थिए । भूमिगत छँदै पोखरेलले केन्द्रीय समितिको एउटा बैठकमा काठमाडौंको कोटेश्वरमा आफ्नो घडेरी रहेको बताए । पोखरेलको यसबेला काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ मा २३ आना जग्गामा बनेको तीन तले घर छ ।
धापासीको घर जग्गा उनकी श्रीमती मिरा ध्वंजु पोखरेलका नाममा छ । पोखरेल आफैंले भरेको सम्पत्ति विवरण फारममा पैत्रिक सम्पत्तिबापत पाएको झापाको चन्द्रगढीको १२ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । भक्तपुरको नगरकोटमा १ रोपनी ११ आना जग्गा श्रीमती ध्वंजुलाई माइतीले दिएको र धादिङको खानीखोलामा श्रीमतीकै नाममा ४ रोपनी जग्गा रहेको पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिए । यसलगत्तै पोखरेललाई प’क्राउ गरेर राजबिराज जेलको हिरासतमा राखियो । त्यतिखेर धुम्बाराहीस्थित पोखरेलको त्यही घरको पानी ट्याङकीमा पैसाको बिटा भेटिएको प्रचार उनकै पार्टीले गरेको थियो ।
त्यसैगरी : मान्सी अग्रवाल १४ वर्षअघि कलकत्ताबाट नेपाल आइपुग्दा २१ वर्षकी मात्रै थिइन् । जब काठमाडौँमा ओर्लिइन् आसपासका पहाड र मनमोहक प्राकृतिक दृश्यले उनको मन लोभ्यायो । यहाँको चिसो मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्यले यी भारतीय युवतीलाई आकर्षित गर्‍यो । त्यसो त, उनका पतिले सुरुका दिनहरुमै भक्तपुर दरबार स्क्वायर र अरु सम्पदा क्षेत्रतिर डुलाएका थिए ।
यी आधा दर्जनमन्त्रीको पद चै’ट बाहिरीयो येस्तो खुलासा !
September 25, 2020 September 25, 2020 Ramash kunwar
ओलीका दाहिने हात मानिने यी चर्चित नेताको खुलासाले मच्चियो ह’लचल, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता झ’स्किए !
December 31, 2020 Ramash kunwar
रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यबाट राजी’नामा दिने तयारीमा